Dilaagii Norway oo la cadeeyay in uusan waalnayn | Somaliska
Ninkii dadka badan ku xasuuqay Norway sanadkii la soo dhaafay ayaa dhaqaatiirtu cadeeyeen in uusan madaxa ka jiranayn sidii markii hore ay dhaqaatiir kale sheegeen.
Anders Behring Breivik oo 77 qof ku dilay magaalada Oslo iyo jasiirada Utøya ee ku dhow Oslo 22-kii bishii July 2011, ayaa dhaqaatiir hore u sheegeen in uu qabay cudur lagu magacaabo “paranoid schizophrenia” taasoo macnaheedu yahay in ninkaan la geyn lahaa halka lagu xanaaneeyo dadka madaxa ka jiran. Maxkamada ayaa hada go’aansatay in ninkaan dambi toos ah lagu qaado oo loo diri doono xabsi maadaama la cadeeyay in uusan waalneyn.
Breivik ayaa xasuuqa u geystay caruur ka tirsanayd xisbiga maamula Norway, iyadoo dadka uu laayahay ay ku jireen dhalinyaro Soomaali ah. Markii la waydiiyay sababta ku kaliftay in uu dadkaan xasuuqo ayuu sheegay in uu dagaal kula jiro Islaamka Yurub ku faafaya.
Breivik ayaa la sheegay in uu lahaa qorsheyaal waaweyn iyo in uu sameeyay shabakad uu kula xiriiro kuwa kale ee neceb Islaamka iyadoo laga cabsi qabo in qaar isaga la mid ah ay wali dadka ku dhex jiraan.
Si kastaba ha ahaatee, go’aanka ugu dambeeya ayaa laga gaari doonaa kiiska ninkaan Bisha July ee sanadkaan. Balse waxay u badantahay in haddii xabsi lagu xukumo uu dhowr iyo toban sano ka dib xoriyadiisa dib u heli doono.
alaahumaa axmil muslimiin fi kuli makaan yaa rab wa ansurahum calaa acdaa ahum yaa rab
kan halna maaha islaam cid wax ka qqadi kartaa ma jiro aan aheen ilahay, fikir kayga ma taageersani in gaal waxa la yeelo iyo in muslin waxa la yeelo toona waayo labadaba ilahay ayaa abuuray, hadana ilahay ayaa quraankiisa ku yiri lakum diinakum waliyadiin, markaa waxa ku kalifay jaahilnimo uun ayaan odhan karaa.
mawaalno ee aweeyn kuwii dhihi jiray haduuba qarax dhaho muslim ayaa sameeyay cunsurnimo ay u qabaan iyo naceeb muslimka alah kor haka dhigo mar walbo muslimiinta alah ayaa la jira
Soma dayow haygu so dayn
Markasta oo ay shil maleegaan waxay oran jireen waa argagixiso Islaam ah.!!!! Haday maxay u oran waayeen waa argagixiso ninkaan??? wax argagax lagutilmaamo asagaaba istaahilee oo 77 qof halmarlaayay oona lasootaagan in uu kas ulaayay….haduu Islaam waalan ahaan lahaa, Ama awoowgiis kasoogeedi lahaa bariga dhexe ama dunida islaamka ah waxaa la oran lahaa waa argagixiso…………Ilaahay ayaa dhagartoodii kasoo dhexsaaray!!!!!!! (Xaqa hadii afka laqabto feerahuu kadilaacaa)…………..
walahay maalintii waan jogay oslo isla markiiba waxaa layiri waxa falkaa gaystay argagaxiso isla markiiba ee tvyada iyo idacadha dadkan ma dhagaystaan miya ma bbc kaliya ayad dhagaysataan kuwaas markii ay wax soo dhamadan ayay waxa ka sheekeeyaan lkin tvyada wadanka 24 online ah aya ala la socda in warkaas layiri qofkii malainta xasuusta aya ama joogay aya dib u xasuusan kara wixii isla markiiba tvyada laga yiri ama websayd yada lagu sooqoray lkin idinku war mahaysaan walahay norway jiyaan ayaan lajoogay walahay waxa ay ku washeen ilahay ajnabi uusan noqon walahay qofki maalinta ajnabi ah ee joogay norway aya dareemi laha xanuunka maalintas iyo dhibta aniga 2 malmod aan guri ku jiray sharcigaygii ana waxan uga imi magaladayda sweden walahay malinta hadad joogi lahaydeen xanuunka dhabta ah wad dareemi lahaydeen
sxb JORJE AFRAX sxb hadad qof walal ka ah aad wax u sheegayso tartiib aya wax loogu sheega ee cayda ma fiicna adoo iga rali ah
jorje afrax "George" says:
@ said, Caadu meeh!?
waa is stupit guy
Argagixiso waxaa loo adeegsadaa mugi larabo in islaamka wax laga fushado. ninkaas umada laayay minii lasoo deeyo uun Norway wax lasii joogo maleh shalat 77 ay eheeede fooogatan waa 70000 minii kale mihiisa nooga haaya ninkaas malag hadileee
waxaa ii joogo YARka (JImcaale)sabuuradda tir tirah, oo xoogaa bi shii aan siiyo war tir wax yar kadib ok bye.